बुद्धले दिएको सफलताको चौथो सूत्रः सम्यक कर्म | Ratopati
personआर‍. मानन्धर exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २४, २०७७ chat_bubble_outline0
सिद्धार्थ गौतम दरबार र राजपाट छोडी भिक्षु भई हिँडेकोले हामीलाई लाग्नसक्छ, बुद्धले संसारबाट विमुख हुन मात्रै सिकाएको होला, निराश हुन मात्रै सिकाएको होला । उनको शिक्षा भौतिक, व्यापारिक उन्नतिको लागि के नै काम लाग्ला र ? तर बुद्धको शिक्षा पढ्दै जाँदा थाहा पाइन्छ, उनले सधैं नै आर्थिक उन्नतिको लागि उद्यमशील रहन प्रोत्साहित गरेका थिए ।
वास्तवमा बुद्धले भिक्षु र गृहस्थ दुवैलाई उद्योगी भएर बस्न बारम्बार भनेका छन् । भिक्षुहरूको लागि उद्योगी हुनु भनेको ध्यानमा दत्तचित्त हुनु हो भने गृहस्थको लागि व्यवसायमा क्रियाशील हुनु हो । त्यसैले बुद्ध कर्मवादी हुन् । तर हाम्रो भाषामा कर्मले दुइटा अर्थ दिन्छ — भाग्य र कार्य । कसैले भाग्यलाई नै कर्म भन्छन् र जीवन भाग्यद्वारा निश्चित गरिएको मान्छन् । यसलाई नियतिवाद (डिटरमिनिजम्) भनिन्छ । त्यसको विपरित कतिले जीवन पूर्ण रूपमा आफ्नै ईच्छाले चल्ने मान्छन् । त्यसलाई स्वतन्त्र इच्छाको सिद्धान्त (फ्री–विल थ्योरी) भनिन्छ । बौद्ध दर्शनको ‘कर्म’ले कस्तो अर्थ राख्छ, त्यसको विवेचना पनि यस आलेखमा गरिन्छ । तर त्यसभन्दा अघि बुद्धले सुनाएका एउटा कथाबाट कर्मको उदाहरण पेश गर्दछु ।
राजालाई घत लागेको कथा
अनि रानीले महाजनकलाई दरबारबाट आफूले लुकाएर ल्याएका रत्नहरू देखाइन् । त्यही बेचेर युद्धको लागि धन जोहो गर्न पुग्छ त किन त्यति ठाढा व्यापार गर्नजानु प¥यो र भन्छिन् । तर महाजनकले पुख्र्यौली सम्पत्तिको छोटो बाटो नअपनाई आफैंले आर्जन गरेर मात्र युद्धमा जाने सोच्छन् । यसैबाट पनि युवाहरूले कर्मठ हुनको लागि धेरै शिक्षा लिनसक्छन् ।